कनकाई, २१ चैत । विकास निर्माणको काममा व्यस्त देखिने स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु यतिबेला खाद्य सामग्रीको अभावमा छटपटाइरहेका आफ्ना जनतालाई दैनिक उपभोग्य सामग्री घरदैलोमा पुर्याउने कार्यमा तल्लीन देखिन्छन् । झापाका सबै स्थानीय तहमा एकद्वार प्रणालीअनुरूप अत्यावश्यकीय सामग्री एकैसाथ वितरण हुनथालेको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु बताउँछन् । कोरोना विरुद्धको अभियानमा सरकारले गरेको लकडाउनको अवधि थप भएपछि […]
स्याङ्जा, १९ चैत । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले राहात सामग्री वितरण गरेको छ । कोभिड १९ को संक्रमणबाट बच्न र यसको रोकथामका लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेपछि दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर बिहानबेलुकाको छाक टार्ने र अतिविपन्न घर परिवारका लागि चामल, दाल र नून राहतस्वरुप वितरण गरिएको हो । गाउँपालिकाका १८० अतिविपन्न घरपरिवारलाई राहतस्वरुप खाद्य सामग्री वितरण गर्ने […]
डोटी, १६ चैत । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा जिल्लामा खाद्यान्न अभाव नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बताउनुभएको छ । आज राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)सँग कुराकानी गर्दै प्रजिअ पौडेलले जिल्लामा तीन महिनाका लागि खाद्यान्नलगायत अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु मौज्दात रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग तीन महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न […]
एकान्तवासमा शाकाहारी भोजन नै उत्तम
काठमाडौँ, १६ चैत । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट हुन सक्ने संक्रमण रोकथापका लागि सरकारले गरेको आग्रहलाई अटेर गर्नुहुन्न भन्ने तथ्य नेपालमा पनि पुष्टि भइसकेको छ । विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको आज ९० दिन पुग्दा हाम्रो देशमा पाँच जनामा कारोनाको संक्रमण देखिएको पुष्टि भइसकेको छ । झलै यहाँ महामारीको रुपधारण गरिसकेको छैन । […]
काठमाडौँ, १६ चैत । विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल केन्द्रीय समितिले लकडाउनका बेला पनि राष्ट्रिय जनावर गाईको आहारको उचित प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । महासङ्घले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मुलुकभर विशेषगरी उपत्यकाभित्र रहेका गाई फार्ममा भुसा, दानालगायत खाद्य पदार्थको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै तिनको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको […]
कुन ऋतुमा के खाने के नखाने ? खानेकुरा अनिवार्य र आवश्यक तत्व हो । खानेकुराविना जीवन चल्दैन । खानपान मानव जीवनका दिनचर्या हुन् । मानव जीवनमा श्रमबाट अन्न मिल्छ, अन्नबाट रस, रसबाट रक्त, रक्तबाट मासु, मासुबाट बोसो, बोसोबाट हड्डी, हड्डीबाट मज्जा, मज्जाबाट विर्य, विर्यबाट ओज, ओजबाट तेज, तेजबाट श्रमशक्ति मिल्दछ । हरेक ऋतुका लागि सोहि […]
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खानेकुराहरु र जडीबुटीहरु । शरीरमा कुनै बाह्य रोगको संक्रमण होस् वा भित्री अंगहरुको खराबी आदि सबैमा रोगसँग लडेर शरीरलाई स्वस्थ्य बनाउने प्रणालीलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भनिन्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्नु भन्नाले हाम्रो शरीरमा विभिन्न रोग लाग्न नदिनु हो । इम्युनिटी पावर एवं रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले हाम्रो शरीरमा संभावित रोगको संक्रमणबाट […]
अत्यावश्यकीय सामान चाहियो, ११३७ मा फोन गर्नुस्, घरमै आउँछ
चैत १३, काठमाडौँ । नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका वासीको घर वा टोलमा अत्यावश्यकीय वस्तु ढुवानी गर्न मिनिट्रकको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा रहेको टोल फ्रि नम्बर ११३७ मा उपभोक्ताले खान नपाएको भन्ने गुनासो आएपछि मिनिट्रक मार्फत अति आवश्यकीय खाद्य ढुवानीको व्यवस्था […]
नारायणपुर, २७ फागुन । पहिले घरमै खानका लागि च्याउ खेती गर्दै आउनुभएकी धनमाया बुढाले अहिले व्यावसायिकरुपमा च्याउ खेती गरिरहनुभएको छ । च्याउ खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिने भएपछि उहाँ आकर्षित हुनुभएको हो । काँचो च्याउ बिक्री नहुने समयमा अचार, सुकुटी र च्याउको धुलो बनाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “लामो समयसम्म राख्न सकिने भएकाले अहिले बजारमा […]
मधुमेह रोग लागेमा के खाने ?
मधुमेह रोग लागेमा के खाने ? आज हरेक घरमा यस्ता रोगी भेटाउन सकिन्छ । खानपिनमा लापरबाहीको प्रतिफल भनेकै मधुमेह भन्ने रोग हो । यस्ता रोगमा के कस्ता खाना खानाले रोग निको हुनसक्छ भन्ने जानकारी हुन सकेमा राम्रो फाइदा हुने देखिन्छ । रगतमा चिनीको मात्रा बढी हुने भएकाले मधुमेहका रोगीले जे पायो त्यही खानेकुरा खानहुँदैन । यो […]
जाडोमा के खाने ? यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुराहरु । अहिले जाडो मौसमको सिद्धिन लागेको अवस्थामा छ, तर जाडो पुरै हटेको भने छैन । जाडोमा परिवारका सदस्यलाई कसरी बचाउने र के खाने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । हामीले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा यो छ की जाडोमा खानपान, जीवनशैली, करिअर, अध्यात्म, पीडा सबै पक्षलाई ध्यान दिएर […]
तरकारीमा भएको चर्को नुन घटाउने अचुक उपायहरु । हामी खाना वा रोटीसँग तरकारी खाने गर्छौ । धेरै मिहिनेत गरेर तरकारी अथवा दाल त बनाइन्छ, तर कहिलेकाहिँ भने नुन बढी भएर धेरैलाई चिन्ता हुने गर्छ । नुन बढी भएको तरकारी खान गार्है पर्छ । यस्तै आफ्नो मिहिनेत परेको हुँदा फाल्न पनि त्यति सजिलो हुँदैन । नुन बढी […]
चितवन, २७ माघ । पर्यटकीय नगरी सौराहामा प्रेम दिवसको अवसर पारेर भोलि मङ्गलबारदेखि खाना महोत्सव हुने भएको छ । चौधौैँ सौराहा खाना महोत्सवको तयारी पूरा भएको छ । रेष्टुराँ एण्ड बार एशोसिएशन (रेवान) सौराहाको आयोजनामा सिसुवार चौरमा महोत्सव हुँदैछ । महोत्सवमा ४० खानाका कक्ष रहने रेवान सौराहाका अध्यक्ष दीपेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । महोत्सवमा स्थानीय […]
यसरी अण्डा उसिन्दा स्वाद पनि मिठो हुन्छ !
एजेन्सी, अण्डा सबैले मनपराउने गर्छन् सबैको भान्सामा प्रयोग हुने अण्डावाट हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि फाइदा छ यो दुई तरिकावाट बनाएर खान सकिन्छ एउटा फ्राई गरेर भने अर्को उसिनेर हो कसैलाई फ्राई गरेको मन पर्छ भने कसैलाई उसिनेको मनपर्छ उसिन्दा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र अण्डा नै फुट्न सक्छ । विचार गरेर उसिन्दा अण्डामा रहेको पोषणलाई […]
थाहा पाउनुहोस्, स्वस्थ दूधवाट हाम्रो बच्चाहरुमा हुने फाइदाहरु
एजेन्सी । स्वास्थ्यको लागि हरेक कुराहरु ख्याल गरिरहेका हुन्छौं । तर सा-सानो बच्चाहरुको लागि पनि त्यो भन्दा बढी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी बच्चाहरुको लागि विभिन्न खालका दुधहरु खुवाउने गर्छन् । स्वस्थ दूध पिउने बच्चाहरु बोसोयुक्त अर्थात चिल्लो पदार्थ बढी भएको दूध पिउनेहरूको तुलनामा बढी वजन अर्थात मोटोपनको संभावना कम हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । […]
स्वास्थ्यको लागि मुङको दाल खानुका फाइदाहरु
मुङको दाल हाम्रो भान्सामा समय समयमा हुने गरेको र हामीले खाने गरेको सर्वविवितै छ । मुङको दाल खानाले स्वास्थ्यमा के कस्तो फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी भएमा अझ बढी मुङको दाल प्रयोग हुने देखिन्छ । मुङको दालमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन तथा खनिज प्रदार्थ पाइन्छ। मुङको दालमा भिटामिन ए, बी, सी, ईका साथै पोटासियम, आइरन, क्याल्सियम […]
जाडो बढेको छ, यी खानेकुरा ख्यान नभुल्नु होला !
एजेन्सी । जाडो मौसममा हरेक मानिसले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । चिसोमा आफ्नो ख्याल गर्न छोड्यो भने समस्या आउन सक्छ । खानाहरुमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । चिसो सिजनमा विभिन्न रोगहरुले पनि सताउने गर्छ । मह चिसोका लागि उचित मानिन्छ । यसमा एन्टिमाइक्रोवायल तत्व हुने भएकोले कीटाणुको प्रवेशलाई नष्ट गर्छ । साथै पाचन प्रक्रियामा सुधार ल्याउँछ […]
कस्तो सागसब्जी खाने ? यस्तो छ डा. राम बहादुर बोहराको सुझाव
सागसब्जी कस्तो ठिक भन्ने कुरा हरेकले जान्न जरूरी छ । सागसब्जी खरिद गर्दा झरिलो, भरिलो, चम्किलो रोज्छौं । हेर्दै रहरलाग्दा तरकारीले हाम्रो आँखा लोभ्याउँछ । किराले खाएको वा राम्ररी नसप्रिएको तरकारी मन पराउदैनौ । राम्रो र चम्किलो देखिने सवै खाले सागसब्जी ताजा हुन्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता छ । तर, आँखा लोभ्याउने यस्ता सागसब्जी स्वास्थ्यका लागि […]
स्वास्थ्यको लागि पत्ता गोभी खानुका फाइदाहरु
नेपालमा पत्ता गोभीको खेती बढी हुने गरेको छ । पत्ता गोभीलाई सलादको रूपमा होस् या काचै किन नहोस् बढी प्रयोग भएको पाइन्छ । हाम्रो देशमा तरकारी र सलादको रूपमा बढी सेवन गर्ने प्रचलन छ । आजको लेखमा मैले पत्ता गोभीका फाइदाबारे प्रकाश पार्नेछु । प्रकृतिको उपहारलाई हामीले भुल्नु हुदैन कतिपय कुरा जानेर होस् या नजारेर […]